China Chain Link Fence orinasa sy mpanamboatra |Shengsong
Ny fefy rojo (antsoina koa hoe harato tariby, fefy harato, fefy rojo, fefy rivo-doza, fefy rivo-doza, na fefy diamondra) dia karazana fefy tenona izay matetika vita amin'ny vy vita amin'ny galvanized na LLDPE. tariby.Ny tariby dia mihazakazaka mitsangana ary miforitra ho zig-zag ka ny "zig" tsirairay dia miraikitra amin'ny tariby avy hatrany amin'ny ilany iray ary ny "zag" tsirairay miaraka amin'ny tariby avy hatrany eo amin'ny ilany.Izany no mamorona ny endriky ny diamondra endrika hita amin'ity karazana fefy ity.
Na te-hihazona zavatra ao anatiny ianao na tsy te hivoaka, fefy rojo ihany no zavatra ilaina.Ny fefy rojo dia manome fiarovana sy fiarovana nefa tsy manakantsakana ny fomba fijerin'ny tany.
Fitaovana: tariby vy karbaona ambany, tariby vy, tariby aluminium, tariby PVC.
Fanasokajiana diamondra wiremesh:
Fefy rojo rojo vy vita amin'ny PVC
Fefy rojo rojo vy galvanisé
Aluminum firaka tariby rojo rojo fefy
Fefy rojo rojo vy tsy misy saina
Fampiasana: Fampiasana betsaka izy io, fiompiana akoho amam-borona toy ny akoho, ganagana, gisa, bitro ary fefy zoo.Ary ny fiarovana ny milina sy ny fitaovana, guardrail lalambe, toerana fanatanjahan-tena fefy, ny lalana green fehikibo fiarovana.
1) Fitaovana: tariby PVC, tariby vy ambany karbaona avo lenta, tariby vy tsy misy pentina
2) Surface fitsaboana: elektrika tafo, mafana-natsoboka tafo, PVC mifono
3) Fampiharana: Chain Link Fencing dia ampiasaina betsaka ho fefy ho an'ny kianja filalaovana sy zaridaina, lalamby, lalamby, seranam-piaramanidina, seranan-tsambo, trano fonenana, sns. Ary koa, azo ampiasaina amin'ny fiompiana biby.
Famaritana ny fefy rojo rojo
cm Halavan'ny fefy (2m) Halavan'ny fefy (2,5m)
cm Lanja kg/sanga Fixing Pole Wire Gauge Wire Savaivony mm Sokafy cm Lanja kg/sanga Fixing Pole
Lanja kg/set Lanja kg/set
Fonosana: horonana karazana compact miaraka amin'ny harona plastika ary horonan-taratasy tsy misy compact miaraka amin'ny harona plastika, na amin'ny pallet
Fefy rojo vy vita amin'ny vy (diamond wire mesh) pvc mifono rojo rojo fefy
1. Fampidirana fefy rojo rojo:
Ny fefy tontonana dia vita amin'ny zinc tsy miovaova voatenona rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo vy sy galvanizedtube avo lenta, natao manokana hiatrehana ny vanim-potoana ririnina henjana.
Izy io dia fefy tariby vita amin'ny vy vita amin'ny zinc mba hisorohana ny harafesina, izay matetika antsoina hoe fefy tafo.
(1).Ny karazany roa amin'ny fefy harato tariby misy rojo vy: galvanized alohan'ny fanenomana (GBW) na tafo aorian'ny fanenomana (GAW).Ny ankamaroan'ny tsena amin'izao fotoana izao dia vita amin'ny galvanized rehefa avy nanenona.
(2).Fitaovana: tariby vy vy na tariby vy mifono PVC.
(3).Fampiharana: Ampiasaina ho fefy ho an'ny kianja fanatanjahan-tena, amoron'ny renirano, fanorenana sy trano fonenana, ary fefy biby.
(4).Toetra mampiavaka: Tsotra, ara-javakanto ary azo ampiharina ny fanenomana.Ny fefy rojo dia mora miasa, loko marevaka, mora karakaraina.Ny harato rojo no safidy voalohany hanatsara ny tontolo iainana.
(5).Fampiharana: rojo rojo fefy dia ampiasaina indrindra amin'ny fanatanjahan-tena fialam-boly saha, zaridainam-panjakana, zaridaina, greenfield, parking nametraka, maritrano, lalan-drano, trano fiarovana sns.
(6).Zinc coating: Ny electro galvanized dia 7-15kg isaky ny metatra toradroa ary mafana dip galvanized is35-400kg isaky ny metatra toradroa.
(7) Fitsaboana ambonin'ny tany:
Galvanized: Electronic galvanized na mafana voatsoboka.
Ny habetsahan'ny palitao zinc dia mety araka ny takian'ny mpanjifa.
PVC mifono: 0.5mm hateviny
(8) Ny sisin'ny fefy rojo: Knuckled-Knuckled, Knuckled-barbed, Barbed-barbed.
Fefy rojo vy vita amin'ny vy
harato (mm) fandrefesana tariby (SWG) Savaivony tariby (mm) Lanja Kg/m2 Coil Savaivony
Volume voajanahary Aforeto ny volume
PVC mifono rojo rojo fefy
harato (mm) fandrefesana tariby (SWG) Savaivony tariby (mm) Lanja Kg/m2 Coil Savaivony (cm)
teo aloha: Fantsika barbed
Manaraka: Fantsika Beton